09 | October | 2012 | Burma Muslim
Daily Archives: October 9th, 2012
Bader Mokan Mosque Covered Buddisht Pagoda ,Akyab, Arakan, Burma,ဗလီအတွင်း ဗုဒ္ဓဘုရားတည်ထားခြင်း ……..
By burmamuslim on October 9, 2012 | Leaveacomment
AD 1727 ANCIENT MOSQUES FORCIBLY CONVERTED IN TO BUDDHIST PAGODA IN ARAKAN STATE BURMA
IN SIDE BADAR MAKAM MOSQUE
Posted in: စကင်, သမိုင်း, အထူး, Photo
ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များသည်နိုင်ငံသားဖြစ် ကြောင်းလွှတ်တော်အသီးသီးသို့ကော်မရှင်ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးရန်တင်ပြထားသည့်စာတမ်း …….
Posted in: စကင်, သမိုင်း, အထူး
ဦးညီညီထွေး(ဗုဒ္ဓဘာသာ မာရမာကြီး)မှ နိုင်ငံသမ္မတထံ အသနားခံတင်ပြစာ (ရခိုင်ပြည် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ဖေါ်ထားသည်။) …
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးညီညီထွေးမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့စွဲနဲ့ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရခိုင်အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးလှုံ့ဆော် ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သောပါတီဖြစ်တဲ့၊ တိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန် ဦးအေးမောင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင် ရွက်၍ တိုင်းပြည်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ဆူပူအုံကြွမှုများ၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများ စတဲ့၊ စတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကြီး များကို ကျူးလွန်နေသော RNDP ၏ သူတော်ယောင် မျက်နှာဖုံးကွာကျစေရန်နှင့် ၎င်း၏နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ပြန်လည်ရ ရှိစေရန် တရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုးတစ်ဦး၏ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ယင်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အလေးထားစဉ်းစား၍ တရားဥပဒေ အရ အရေး ယူပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်းလဲ သိရှိရပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသူ ပညာရှင်တစ်ဦးမှ
“ဒီအပြစ်မဲ့ မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုး အိတ်ဖွင့်ပေးစာရေးသားသူ အနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုး မိုးရေး အကြောင်း တဖွဖွ ပြောဆိုနေသူ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒီမိုကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ထံ စာရေးသားပေးပို့ပြီး ၎င်းရဲ့ကိစ္စအတွက် အရေးယူပေး ပါရန် တောင်းဆိုသင့် တယ်” လို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအသံကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
၎င်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမူရင်းကို စာရှုသူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in: စကင်, သတင်း, အထူး
Rohingyas daily being killed with government support
(A)A Rohingya tortured and hung by Military and Bengali Rakhine Gang
On 8th October, 2012, at around 3:45pm,aRohingya from Gawdu Thara, Maungdaw south, was arrested on the way back from mountain by military and Bengali Rakhine gang. He went to the mountain for collecting firewood. He is identified as Abdu Karim (F) U Abdu Gawfurr, 28 years. As he was severely tortured and hung, his life survival is inacritical condition. Similar cases have been being occurred throughout Maungdaw and Buthidaung townships, some of which are known by the community and some are totally unknown. Although Act-144 imposed by the central government in most of the townships in Rakhine State, it is implied only for Rohingya communities. According to the said Act, not more than5people can gather. Interestingly, Rakhines can even do demonstration with mass people in any part of the Rakhine State, which has been continually heard from broadcasting channels. That clearly shows that the Act has been imposed only for Rohingyas.
(B) A detainee died in Buthidaung jail
On 8th October, 2012, at around 2:00pm, one of the detainees, who was arrested in June, 2012, falsely accused for involvement in the communal violence in Maungdaw, died in Buthidaung detention center during investigation process with inhumane torture by government authority. He is Moulvi Haroon (F)xxxxxxxxx, 38 years from Du-Thanda (Hawns Sawra) hamlet, Thanda village tract, Maungdaw south. He is originally from Sittway and got married withawoman from the village mentioned above. The dead body was seen onapush-cart by one of the Rohingyas who went to Buthidaung jail in order to meetaprisoner. Many Rohingyas have been died with severe torture in Buthidaung Detention Center, but few are known. As far as the information collected, the dead body of Rohingya is generally thrown somewhere that is in hide from the public.
Forward mail :
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းရာဇ၀င်များကိုလေ့လာကြည့်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ် ၌နေ ထိုင်ကြသော အစ္စ လာမ် ဘာသာဝင် မြန်မာမွတ်ဆလင်များ သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်၊ (၁၂၀၀) ခန့် လောက်ကစ၍ အစု လိုက်သော် လည်းကောင်း၊အနည်း ငယ် သော် လည်းကောင်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၀၀) ခန့်အထိ ၀င်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်း တွင် အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ တွေ့ရှိ ရသည်။
မြန်မာ့ရာဇ၀င် ၊သမိုင်း များတွင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမြန်မာနိုင်ငံ သို့ ၀င်ရောက် နေ ထိုင် ပုံကို လေ့လာလျှင် မြန်မာမွတ်ဆလင်များသည်လည်း ၎င်းတို့ထက်နောက် မကျသေးကြောင်းကို သမိုင်း သမိုင်း အထောက်အထားများအရသိရှိနိုင် ပါ သည်။ ထို့ကြောင်း မြန်မာမွတ်ဆလင်များသည်လည်း ထိုခေတ် ထိုအခါ(နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀)ကျော် ကပင် ရောက် ရှိနေ ကြောင်း လယ်ပြင် မှာ ဆင်သွားသကဲ့သို့ ရာဇ၀င်၊သမိုင်း တွင် ထင်ရှားနေ ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွင် ၁၈၂၃ ခုမတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်ရင်းနိုင်ငံ အဖြစ် နေထိုင် သူ များ သည် တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်ဟုပြဌာန်ထားသဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ သား ဥပဒေ နှင့် အ ကျုံ့ဝင် သော ၁၈၂၃ ခု မတိုင်မီက မြန်မာ့သမိုင်းထဲက မွတ်ဆလင် များအ ကြောင်း ကိုရှာဖွေ၍ စာဖတ်ပရိသတ် ဖတ်ရှူ လေ့လာ သိရှိ နိုင် ရန်အ လုိ့ ငှါ ဤ မှတ်စု ကိုရှာ ဖွေစုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ် ပါ သည်။ မြန်မာ့သမိုင်း`၌မွတ် ဆလင်များ ထဲတွင် (၁) ဗမာ မွတ် ဆလင် (၂) ရခိုင် မွတ် ဆလင် (၃)ကမန် မွတ်ဆလင် (၄)ပသျှူးမွတ်ဆလင် (၅)ပန်းသေး မွတ် ဆလင် ဟူ၍ (၅)မျိုး ခွဲခြား လေ့လာ နိုင် သည်။ များပြားသော ရာဇ၀င်၊ သမိုင်းများကို လေ့လာ ရန် အခက်ခဲ ရှိသူများ အနေဖြင့် ဤမှတ်စု ကို လေ့လာ ခြင်း ဖြင့် အချိန် တိုတို အတွင်း အလွယ်တကူဗဟုသုတတိုးပွါးနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်ကချ မှတ်သော မူဝါဒအညီ … ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်း လုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး ၊ အချုပ်အချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး သည် … တို့အရေး … ဟူသော ဆောင်ပုဒ် ကိုဦးထိပ်ထားလျက် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးရေး၊ အပြန်အလှန်ခင်မင် လေးစား ရေးတွက် သမိုင်း ထဲ က မြန်မာ့မွတ်ဆလင် အကြောင်း ကို ရေး သား ဖေါ်ပြပါသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ( ၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင်မီကပင်ရင်းနှိုင်ငံအဖြစ်
သမိုင်းဆရာ Dr.သန်းထွန်း၏အဆိုအရ (၁၄၄၂-ခု) ကျောက်စာပါ အချက်များကို ကိုးကား၍ အာရ်ကန် မင်းများတွင် မူဆလင်ဘွဲ့ နာမည်များ ရှိခဲ့သည်။ ထိုမူဆလင် ဘုရင်များမှာ နတ်မြစ် အရှေ့ဘက် နှင့် ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက် မေယုတောင်ကြားက မွတ်ဆလင်များသည်(ယနေ့ရိုဟင်ဂျာ)တွေဖြစ်သည်။သူတို့ ၎င်း ဒေသမှာ နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းထောင် ကျော်ပြီ လို့ပြောသည်။ Ref : ဒေါက်တာ သန်းထွန်း-Kalya Magazine p-27,1994,August
အေဒီ ၇၀၀ နှင့် ၁၅၀၀ ကြားတွင် အနောက်တိုင်းမှ အာရပ်ကုန်သည်၊ ပါရှင်းကုန်သည် နှင့် ရောမကုန်သည် တို့သည် မိမိတို့ ပင်ရင်းတိုင်း ပြည်များမှ ရွက်သဘောင်္ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းကိုကျော် လွန်ကာ အရှေ့ဖက် တရုတ်ကမ်းခြေသို့လည်းကောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။၂ အာရပ် တို့သည် ပင်လယ် ကူးသန်း သွားလာရာ၌ အရေးကြီးသော ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့များ၊ ကုန်သည်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်း များ၊ အချက်အချာကျသော နေရာ၏ တည်နေပုံ၊ မျက်နှာပြင်အနေအထား၊ နေထိုင်သည့်လူမျိုးများ၊ ထွက်ကုန်များ အစရှိသည်တို့ကို စနစ် တကျ လေ့လာသုတေသန ပြုလေ့ရှိရာ- (၉) ရာစု အာရပ်ပထ၀ီဝင် ဆရာများ၊ ခရီးသည်များ၊ သုတေသီများ၏ မှတ် တမ်းများတွင် ရခိုင်ပြည်နှင့် မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း မွန်တို့နယ်ဖြစ်သော ရာမည ဒေသများအကြောင်းကို တွေ့ရှိနိုင် ပေသည်။၃ ရာခိုင်ရာဇ၀င်များအရလည်း အာရပ်တို့သည် အေဒီ (၈) ရာစုမှစ၍ ရခိုင်ပြည်သို့ ရောက်ရှိအခြေချနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိပါသည်။ ရခိုင်ရာဇ၀င် အထောက်အထားများကို ကိုးကား၍ ၁၈၄၄ – ခုထုတ် ဘင်္ဂလား အေးရှာတိခ် ဆိုဆိုင်အေတီ ဂျာနယ် ( Journel of the Asiatic Society of Bengal) တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
“ရခိုင်ဘုရင် မဟာတိုင်း စန္ဒြမင်း (အေဒီ ၇၈၈ – ၈၁၀) လက်ထက်တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး အာရပ်သင်္ဘောများစွာ ပျက် စီးခဲ့ကြောင်း၊ သင်္ဘောသားများက သေဘေးမှလွတ်ကာ နီးရာကမ်းခြေဒေသဖြစ်သော ရမ်းဗြဲကျွန်းသို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ ကြောင်း၊ ရခိုင်ဘုရင် ကြားသိသောအခါ ယင်းတို့အား ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုဧည့်ခံပြီး လယ်ယာမြေများပေးကာ အခြေတ ကျနေထိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း” ပါရှိသည်။၄ အေဒီ ၁၈၇၉ ခုထုတ် ဗြိတိသျှဘားမားဂေဇက် (British Burma Gazetters) ကို ကိုးကား၍ အာရ်ဘီ စမတ် (R. B. Smart) ကလည်း “အေဒီ ၇၈၈ – ခုနှစ်တွင် မဟာတိုင်း စန္ဒြမင်း သည် ရခိုင်ထီးနန်းကို ဆက်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းသည် ယခင် ရာမ၀တီ မြို့ဟောင်းကို မြို့သစ်တည်ထောင်ကာ နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ်တိုင် စိုးစံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမင်းလက်ထက်တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီးတွင် သင်္ဘောများစွာ ပျက်ခဲ့ကြောင်း၊ သင်္ဘောသားများမှာ မဟာမေဒင် ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကို ရခိုင်ပြည်မသို့ ပို့ကာ ကျေးရွာများတွင် အတည်တကျ နေရာချထားပေးကြောင်း” စစ်တွေဂေးဇတ် (Akyab Gazette) တွင် ရေးသားထားသည်။၅ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခဲ့သော ဗိုလ်မှူးဘရှင်ကလည်း- မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ် ဆိပ်ခံမြိ်ု့များဖြစ်သော ကျောက်ဖြူ၊ ပုသိမ်၊ သန်လျင်၊ မုတ္တမ၊ မြိတ် စသည်တို့တွင် အလားတူ သင်္ဘောများ ပျက်ပြားခြင်းဆိုင်ရာ အကြာင်းအရာများ အချိန်ကာလ စောစွာကပင် ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မွန်-မြန်မာ ရာဇ၀င်များနှင့် အချို့ သော ဘုရားသမိုင်းများတွင် သင်္ဘောပျက် စစ်သား များအကြာင်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း – ၁၉၆၁ -ခု နှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ သော အာရှသမိုင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် တင်ပြသော “မြန်မာနိုင်ငံ သို့ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များ ၀င်ရောက် လာပုံ (အေဒီ ၁ရ၀၀)” စာတမ်းတွင် ရေးသားထားပါသည်။
မြောက်ဦးမြို့၏ထူးခြားချက်ကား ကုလားမွတ်ဆလင်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း ကလည်း အ ဆန်း မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယမြောက်ဦးခေတ်တွင် ဘင်္ဂလား ၁၂ ပြည်နယ်ကို ပြန်လည် တိုက် ခိုက် သိမ်း ပိုက် ရာ`၌ စစ်သူကြီးဓမ္မဇေယျသည်ကုလားပြည်မှ ကုလား ဘုရင်နှင့်တကွ သုံ့ပန်းတို့ကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ရာတွင် ကုလား (၁၀၀၀၀) ကို ဆင်စာမြင်း စာရိတ် အစု၊ကုလား(၂၀၀၀) ကို ဝါးခုတ်၊သစ်ခုတ် အစု၊ ကုလား (၁၀၀၀) ကိုလယ်လုပ်၊ ကုလား(၁၀၀၀၀) ကိုဟင်းသီးဟင်ရွက်၊ငရုတ်၊ကြက် သွန်၊ကွမ်း ဆက်အဖွဲ့ အစု ကုလား (၂၀၀၀) မိဖုရား၊သားတော်၊ သမီးတော်များ၊ အိမ် ၌ ရေခပ်၊ထင်းခွဲ၊ ကုလား (၂၀၀၀) လေးကိုင်းစစ်သည်၊ကုလား (၁၀၀၀) ရက်ကန်းရက် ၊ကုလား (၁၀၀၀) ယာဉ်ထမ်း၊ ကုလား(၁၀၀၀) ဆားချက်၊ ကုလား(၁၀၀၀)မြို့တွင်းမြို့ပြင်အမှိုက်ကျုံး၊ သန်ရှင်းရေး စသည်ဖြင့် ကုလားစုစုပေါင်း (၄၇၅၀၀) ဦး ဖမ်းဆီးလာကာတာဝန်ခွဲဝေ အပ် နှင်း ပေးခဲ့ သည်ဟုရေးသားဖေါ်ပြ ထားသည်။(စာ ၂၅၇-၂၅၈)
(ကိုးကား ။ ။ကစ္စပနဒီမှ ဓညဝတီသစ္စာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာပေဗိမာန်ဆုရ စာအုပ်)(သုတပဒေသာ – ဝိဇ္ဇာ)ဆုရ။ ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ။
(စာရေးသူ ကလောင်အမည် မောင်မိုးယံ ၊ မူရင်းအမည် ဗိုလ်မှူးမျို့သန့်(ငြိမ်း)။စာပေဗိမာန် စာတည်းမှူးက မှတ်ပုံအမှတ် ၀၇၄၉၂ ဖြင့် ပုံနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၃၉၁၁ ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။)
ရမ်းဗြဲ တောင်ကျောင်းဆရာတော် ရေး ရခိုင်ရာဇဝင်သစ် ပထမအုပ်စတုတ္ထတွဲ ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ တို့ တွင်ငနှလုံမင်း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက်ထက် ကုလားပြာည်ကိုစစ်ထိုး
ရာ သုံ့ပန်းအဖြစ် (၄၇၅၀၀) ဦး ခေါ်လာပြီး မင်းသုံး၊မိဖုရားသုံး၊ မင်းသားသုံး၊ မင်းသမီးသုံး မှူးမတ်သုံး အတွက် အသီးသီး အစုနှင့် ခွဲတော်မူသည်။ ဤကားဓညဝတီအရေးတော်ပုံ`၌ ပါသောငနှလုံမင်း အကြောင်း တည်းဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
(ရမ်းဗြဲ တောင်ကျောင်းဆရာတော် ရေး ရခိုင်ရာဇဝင်သစ် ပထမအုပ်စတုတ္ထတွဲ ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃)
Francois Bernier ၏မှတ်တမ်းနှင့် Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မှ ၁၆၂၄ ခှုနှစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူများမှာ (၄၂၀၀၀) လေးသောင်း နှစ်ထောင် ရှိ သည်ဟု ဆို၏ ဆာအာသာဖယ်ယာက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူ ဦးရေး
သည် ရခိုင်ပြည် စုစုပေါင်း လူဦး ရေး၏ ၁၅ % ရှိသည် ဟု ဆိုထားသည်။ ရခိုင်ဘုရင် ကထိုဖမ်းဆီးယူလာ သောလူထဲတွင် အတတ် ပညာ ရှင် ဖြစ် သူ လေးပုံတစ်ပုံ ခန့်ကိုယူ ထားပြီး ကျန်လူများကို တစ်ဦး လျှင် (20 Rs မှ 70 Rs ဖြင့် )ဈေးတင်ရောင်း ချ ခဲ့သည်။ ထိုဖမ်းဆီးကျွန်များကို လက်ဖဝါးဖေါက်ပြီး ကြိမ်လုံးဖြင့် ချည်နှောင်ကာ ကြက်၊ငှက် ကဲ့ သို့ သင်္ဘော ကုန်တွင်း ထဲ ထည့်သွင်းပြီး သယ်ဆောင် လာခဲ့သည်ဟုဆို၏။
(Harvey,Outlineof Burmese History Page, 94 )
(က)- မင်းဘာကြီး ခရစ်ဝက္ကရာဇ်(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) နှင့် မင်းရာဇကြီးတို့ လက်ထက် က သောင်းထီး ကျွန်းမှကုလားလေးထောင်စီ ဖမ်းဆီးခေါ်လာခဲ့ကြောင်း၊ မင်းရာဇာ ပဲခူးသို့ စစ်ချီခဲ့ ရာတွင် ကုလား မွတ်ဆလင် သူရဲကောင်း ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း)သားတော် အိမ်ရှေ့ မင်းသား မင်းခ မောင်း ပိုမော်တင် ချောင်း၊ သံလျှင်မြို့သို့ စစ်ချီလေသည်ဟု ပါရှိသည်။မောရစ်ကော လစ် ရေး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ ၁၂ တွင် (ထို့ကြောင်းရခိုင်ပြည် သည် ပထမနှစ် (၁၀၀၀) အတွင်းကုလားမင်းများအဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်) ဟူ၍လည်းကာင်း၊စာမျက်နှာ (၁၃) တွင် ခရစ် ၉၅၇ ခှုစ် နောက်ပိုင်းတွင်ရခိုင်ရာဇဝင် စတင်ခဲ့တောသည် ) ဟု လည်းကောင်း စံရွှေပု ကဆိုသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊စာမျက်နှာ ၂၁ တွင် ခရစ်နှစ် ၉၅၇ မတိုင်မီက
ရခိုင်ပြည်သည် ကုလား ပြည် တစ်ပြည်ဖြစ်ခဲ့ သည်ကတော မှန်ပေ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း – စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည် ။ရခိုင်ပြည်ကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များက အေဒီ ၁ ရာစုမှ ၁၁ ရာစု အထိ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
(ခ) – အထက်ပါစာအုပ်၏နောက်တစ်နေရာတွင် တရံရောအခါ စစ်တွေကျွးန်ကုလားတို့ကို ဓါးပိုင် ကြီး သောက်ကြယ်က ခေါ်၍ ဆုလာဘ်ပေးကြောင်း ၊မင်းမသိအမတ် မြို့သစ်စား ရွှေသဲ သိစေလျှင် ထို အကြောင်း ကိုလျှေက်ထား လေသော် ဟုပါရှိရာ (ပြည့်ရှင်မင်းမဟာရာဇာ လက်ထက်) စစ်တွေမှာ ထိုစဉ် ကပင် ကုလားမွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားနေသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားစာရေးဆရာများ၏အထက်ပါမှတ်တမ်းများအရ ထိုစဉ်က မူဆလင် ဦးရေ အများ အပြားရှိသည်ကိုခန့်မှန်း နိုင်သည်။ ဤ အရပ်ရပ် မူဆလင်များသည် ရှူးဂျား မင်းသား ၁၆၆၀ ခုနှစ်ရခိုင် သို့ခိုလှုံလာသည့် ကာလ ထက်အချိန်ကာလ အားဖြင့် စော နေသည်ကိုတွေ့ ရ သည်။ရခိုင်ဘုရငသည် လေးသညတော် (ကမန်)တပ်ဖွဲ့ဝင် ရှားရှူးဂျား မင်းသား နောက် လိုက်များ ထက်ရှေးကျသူများဖြစ် သည်ရခိုင်ဒေသတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့အစ္စလာမ်ဘာသာ သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်ဟုဓညဝတီဆရာ တော် ဦးညာဏ၏ရခိုင်ရာဇဝင် ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည်း ကောင်း၊ ဦးကြည် မြန်မာ သမိုင်း စာမျက်နှာ (၁၆၀ )`၌လည်းကောင်း ဦးလှထွန်းဖြူ ၏ ငွေစကားရည်လုပွဲစာအုပ် စာမျက်နှာ (၄၇) တွင် လည်း ကောင်းရေးသား ဖေါ်ပြထားသည် ကိုတွေ့ရှိရသည်။
Maurice Collis ရေးသော The Land Of the Great Image အား ဦးလှဒင်က ရွှေရတနာ မြေ အမည်ဖြင်ပြန်ဆို ရေးသာဘာသာပြန်ဆုရစာအုပ်၏ စာမျက်နှာ (၁၉၁) တွင် အေဒီ ၆၃၀ ခုနှစ် က ရခိုင်ပြည် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ပါဝင်ခဲ့၍ နေထိုင်သောလူမျိုးများမှလည်း ဘင်္ဂလား ပြည် မှလူမျိုး များ နှင့်အသွင် တူကြ သည်။ ထိုနည်းတူဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်မျိုး စလုံးပြိုင်တူထွန်းကားခဲ့ သည့်အထောက် အ ထား များ ရှိသည်ဟုဖေါ်ပြသည်။အိန္ဒိယ တိုက် ငယ်တွင်အထူးသဖြင့် ပါကိစ္စတန်နှင့်ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အများစုသည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ရာ ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်`၌ လည်း မြောက်ပိုင်း `၌လည်း ရခိုင်လူမျိုးဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုမှာအစ္စဘာသာသို့ကူးပြောင်းကိုး ကွယ် လာကြသည်။ ထိုသူများမှာရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကပြည်သည် ဘင်္ဂလား သစ္စာတော် ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ဘင်္ဂလား(၁၂)မြို့ခေါ် ဘင်္ဂလား ဒေသ သည်ရခိုင် ပြည်၏ အင်ပါယာ အဖြစ် သို့လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ကျရောက် ခဲ့ကြကြောင်း History Of Burma နှင့်သမိုင်းစာအုပ်များ တွင်ဖေါ်ပြထား သည်ကိုတွေ့ရသည်။
(က)- ၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကိုဗမာ ဘုရင် သိမ်း ပိုက်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသ ရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်းမွန်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလား ဂေါလ် ဆူလတန် ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင် မြောက်ဦးမြို့ တည် ၍ မြောက် ဦးခေတ် ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
(င)- စန္ဒ၀ိဇယ (၁၇၁၀-၁၇၃၁)လက်ထက်ကျမှ ထိုကမန်တို့အား နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ များစွာ သော ကမန် တို့အား ရမ်းဗြဲကျွန်း၊စစ်တွေအနီး သင်းဂနက်၊ သာယာကုန်းကျေးရွာများသို့ ပို့ထားခဲ့သည်။ ရခိုင် ပြည်နယ် ကမန်မွတ် စလင်မ် တို့အပြင် စစ်တွေမြို့ အရှေ့ပိုင်းဒေသများ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် သံတွဲ တစ်ဝိုက်တွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြ သော အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ရခိုင်များ အနှံ့အပြားရှိနေသည်။
(၁) တောင်ငူ (၂) ရမည်းသင်း (၃) ညောင်ရမ်း (၄) ယင်းတော် (၅) မိတ္ထီလာ (၆) ပင်းတလဲ (၇) တဘက်ဆွဲ (၈) ဘောဓိ(၉)သာစည် (၁၀) စည်ပုတ္တရာ (၁၁) မြေဒူး (၁၂) ဒီပဲယင်း စသည်တို့ တွင် ဖြစ်သည်။အ ထက် ဖော်ပြ ပါ အတိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် အာရဗ်သင်္ဘောများပျက်၍ ၀င်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အာရဗ်ပါရှန်ကုန်သည်များကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး စခန်း များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ သို့ ရွေှ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။(နဝတ-ဦးစီးထုတ်ဝေသောသာသနာရောထွန်းစေဖို့ – စာအုပ်စာမျက်နှာ ၆၇ )
၁၆၆၈ ခုနှစ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ရှားရှူးဂျားဗလီကြီးကို တည်ဆောက်ထားသည်ကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်ရသော ရှေးခေ တ် ကပင်မွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်းသမိုင်း အထောက်ဖြစ်သည်။( အမှတ်စဉ် – ၅၆ – ကု ရှု )
(ခ) – ၁၆၆၈ ခုနှစ် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ပန်မြောင်းရွာတွင် အာလောင်မ် လောန်ကာ ဗလီ ၊ ကန်ကြီ (၁၂) ရွာ ကိုတည်ဆောက်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။(ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ရသ စုံ မဂ္ဂဇင်း ၊ သန်းထွန်း(သမိုင်းပညာရှင်)
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုဂံခေတ်အစောပိုင်း ကာလကပင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ‘အစ္စလာမ် ဘာသာသည်ခရစ်ယာန်ထက်စောပြီး မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုိင်သည်။ ပုဂံ ကျောက် စာ အချို့တွင် ”ပန်သိယ်”” ပ သည်” ဟုရေးသားထား သဖြင့် ပုဂံခေတ် ကပင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များရှိလိမ့်မည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
[ဒေါ်တင့်စိန်၊ကုန်းဘောင်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုနိဒါန်း၊ တက္ကသိုလ်ပညာ ပဒေသာ စာစောင်၊ ရန်ကုန်၊ တက္ကသိုလ် များပုံနှိပ်တိုက်၊အတွဲ၃၊အပိုင်း၎၊စာ-၇၅၊၁၉၇၃၊ဇူလိုင်။]
(၂၉-၁၁-၆၉ နေ့ထုတ် ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ စာ-၅)ထိုအချက် ကို အထောက် အထားပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရှေးခေတ်ဘုရင်မင်းများ အုပ်စိုးစဉ်က အရဗီ၊ ပါရှား၊ အူရဒူကျောက် စာများရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်း နိုင်သည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် (အေဒီ ၁၇၂၅-၁၈၈၅)တွင် အစ္စလာမ်စာပေ အမြောက်အမြား တွေ့ရှိရ သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အား မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုကို စတင်တွေ့ရှိရသည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ယူနက်စကို အတွင်းရေးမှူး များ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန် ထားသော နိုင်ငံတကာစာပေ၌ အကျော်ကြားအထင်ရှားဆုံး စာအုပ်(၁၀၀)စာရင်း အရ ဘာသာ ရေးကဏ္ဍ၌တစ်အုပ်အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ဂန္ထ၀င်စာပေ ကျမ်းတစ်ဆူဖြစ်ပါသည်။
[မောင်ဆုရှင်၊ ဂန္ထ၀င်စာပေဟူသည်၊ ဂန္ထ၀င်စာပေစာတမ်းများ (ပထမတွဲ)၊ စာ-၉၅၊ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်၊၁၉၉၁]
ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ ကိုရမ်ကျမ်းကို မြန်မာဘာသာ မပြန်ဆိုရသေး လို့ အာရေဗျ ဘာသာ နဲ့ဖတ်နိုင်အောင် သင်ပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြန်ဆိုစေခဲ့တယ်။”[တတိယနှစ် ၀ိဇ္ဇာသင်တန်း (သမိုင်းသာမန်) သမိုင်းဘာသာပို့ချချက်များ၊ စာ-၃၇၊ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း သင်ရိုး အမှတ်(၃၀၃)အတွဲ(၂)၊ တက္ကသိုလ်စာပေး စာယူသင်တန်း၊ စာစဉ် (၁၁၅) ၁၉၈၇၊ စက်တင်ဘာ]
သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်းမှာ သက္ကရာဇ် ၁၁၇၈ ခုနှစ်တွင် ဘိုးတော် ဗဒုံမင်းထံတင်သွင်းသော ကျမ်း ဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား(၁၁၄၃-၁၁၈၀)ခုလက်ထက်တွင် သာသနာပေါင်းစုံနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဘုရင်ဧကရာဇ်က စူးစမ်းမေးမြန်းလေ့လာတော်မူရာတွင် အစ္စလာမ်သာသနာ အတွက် ဦးနုက ရေးသား တင် ဆက်သော အစ္စလာမ်သာသနာလျှောက်စာတမ်း ပင်ဖြစ်ပေ သည်။ [သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်း၊ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏ကျမ်းဦး စကား၊ စာ-(ဈ)၊ အစ္စလာမ်စာ ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၆၀]
ယနေ့တိုင် အယုံအကြည်ရှိသူများ သည်နတ်ကွန်း နှင့် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့အား ကိုးကွယ်ကြ သည်။ ထို ကိုးကွယ်သူ များသည် မိရိုး ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသော်လည်း ဝက်သား ကို ရှောင်ကြသည်။ ယနေ့တိုင် နှစ်စဉ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမြဲတောင်ပြုန်း ပွဲတော် သို့ သွားရောက်စဉ် ဘတ်စ်ကား (သို့) ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက် မှဝက်သားကို သယ် ဆောင် သွားခြင်းမပြုရ ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ကြေကွဲဖွယ်ရာ ကွပ်မျက်မှု ကို အကြောင်း ခံ သည့် အုပ်ချပ်နှစ်ချပ်စာ နေရာလွတ်ကို ယနေ့တိုင် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
(ab “The Muslims of Burma” A study ofaminority Group,
by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden.)
ညီနောင်နှစ်ဦး အား အညှိုးအတေးထားရှိသော သူတို့သည် စေတီ တွင် အုတ်နှစ်ချပ် စာ နေရာ ကို အနော်ရထာ မင်းကြီးမြင်သာစေရန် အလွတ်ထားခဲ့သည်။ အနော်ရ ထာမင်း ကြီးသည် အမှု သွားအမှုလာကို စုံစမ်းကြားနာ စစ်ဆေးေ တာ် မူပြီးနောက် ၎င်းညီနောင်နှစ်ဦး အား အမိန့် တော် မနာခံသည့် ပြစ်ဒဏ်မျှသာပေးရန် ရာဇသတ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းညီနောင် တို့သည် ပြစ်ဒဏ် အစား သတ်ဖြတ် ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ် ပြီးနောက် အနော်ရထာ မင်း ကြီး၏ ဖောင်တော်သည် ရွေ့လျား ၍ မရပဲ ဖြစ်နေ ခဲ့သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရွှေဖျင်းညီ နောင်တို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်းကို မလိုလားသော မိတ်ဆွေ မင်းမှုထမ်း တို့၏ အသံတိတ် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့် လည်း ဖြစ်ဖွယ်ရာသည်။ ထိုစဉ်ကတော်ဝင် သင်္ဘောသားတို့ အများစုမှာ မွတ်စလင် များ ဖြစ်ကြသည်။အိန္ဒိယလူမျိုး နန်းတွင်းပညာရှိ ပုဏ္ဏားဖြူ ပုဏ္ဏားမည်း များက ရွှေဖျင်းညီနောင်တို့သည် အနော်ရထာ မင်း ကြီး အားသစ္စ္စာစောင့်သိစွာ အမှုတော် ထမ်း ခဲ့သော် လည်းမတရားသဖြင့် အပြစ်ပေး ခံရပြီး နတ် အဖြစ်သို့ ဘဝ ပြောင်းသွား၍ မကျေနပ် ချက် ကို ဖော်ပြ သည့်အနေဖြင့် တော် ဝင်ဖောင် တော်၏တက်မ ကို ဆွဲကိုင် ထားသောကြောင့် ဖောင်တော်ရွေ့လျားမရ ဖြစ်နေသည်ဟူ၍ လျှောက်တင် ကြသည်။ ထိုသို့လျှောက် တင်ကြ သောအခါ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် ရွှေဖျဉ်းညီနောင်နှစ်ဦးအား ရည်စူး၍ နတ်ကွန်း ကြီး တစ် ခု ဆောက်လုပ်စေပြီး လူတို့အား ထိုညီနောင်ကို ကိုးကွယ်ပသ စေသည်။
(Online Burma/Myanmar Library )
မွတ်စလင် များမြန်မာနိုင်ငံသို့ အဦးဆုံးရောက်ရှိသည့် နေရာနှင့် ကာလ မှာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံ တော်ကြီးဖြစ်သည့်ပုဂံခေတ်ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၄၄ ခု ဟု မြန်မာ့ရာဇဝင်များတွင် မှတ်တမ်း တင် ထားသည်။ ဗျတ်ဝိ နှင့် ဗျတ္တ ဟု အမည်ရသော ဗျတ်မျိုးနွယ်ဝင်အာရပ် သင်္ဘောသား နှစ်ဦး သည် ၎င်းတို့စီးနင်းလာသော သင်္ဘောပျက်ရာမှ ပျဉ်ချပ်တစ်ချပ်ကို အမှီပြု၍ သထုံ အနီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းခြေ တစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
(“The Muslims of Burma” A study ofaminority Group,by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2,paragraph 3, line 1,2&3 )
ဗျတ် ညီနောင်နှစ်ဦးအကြောင်းဖော်ပြထားသော မြန်မာ့ရာဇဝင် မှတ်တမ်း တစ်ခု တွင်မူ ထိုညီ နောင်သည် ၎င်းတို့ခိုလှုံနေထိုင်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ၎င်းတို့အားခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ သော ဘုန်း ကြီး ဆွမ်းစားရန် စီစဉ်ထားသော ဇော်ဂျီအသေ(ဇော်ဂျီ ရုပ်ကလာပ်) ၏ အသားကို စားပြီး နောက် ဆင်ပြောင်ကြီး တစ်ကောင်မျှ ခွန်အားကို ရရှိခဲ့ သည် ဟု မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြ ထား သည်။ သထုံ ဘုရင်သည် ထိုညီနောင်တို့အား စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သဖြင့် အကြီးဖြစ်သူအား၎င်း ၏ ဇနီးမယား ၏အိမ်တွင် အိပ်ပျော်နေခိုက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခဲ့သည်။ညီငယ်ဖြစ်သူ သည် ပုဂံသို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားပြီးအနော်ရထာမင်းကြီးအပါးတော်တွင်ဝင် ရောက်ခို လှုံ ခစားခဲ့သည်။သူသည် ပုဂံမြို့ နှင့် မိုင်ပေါင်းအတန်ငယ် ကွာဝေးသော ပုပ္ပါး တောင်သို့ တစ် နေ့ လျှင် ဆယ်ကြိမ် သွား၍ ပန်းများကိုယူလာရလေ့ရှိသည်။ ပုပ္ပါးရှိ မိန်းမပျိုတစ်ဦး နှင့် အကြောင်း ပါ၍ ရွှေဖျင်းညီနောင်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သော သားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။
( Pe Maung Tin and G.H.Luce, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma)
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော် (၁၂၀၀) ခန့်ကစ၍ အုပ်စုလိုက်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးချင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းပျံ့နှံ့ဝင် ရောက် ခဲ့ပါ သည်။ သမိုင်း အထောက်အထားများအရ အစ္စလာမ် ဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ရော က် ရှိ လာ ခဲ့ပုံမှာ ပြည်ပ အစ္စလာမ်သာသနာပြုများက မြန်မာ နိုင် ငံသို့လာရောက်
သာသနာပြု သဖြင့် ရောက် ရှိလာခဲ့ခြင်း မျိုး မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ရောက်ရှိလာ ပုံနှင့် ပတ်သက်၍အောက် ပါသမိုင်း မှတ်တမ်း အထောက် အထားများ အရ လေ့လာသိရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ဝေသော(စာမူခွင့်ပြုချက်-၃၄/၉၇(၃)၊ ပထမအကြိမ်ပုံနှိပ်) သောသာသနရောင်ဝါထွန်း စေဖို့ စာအုပ်စာမျက်နှာ (၆၅-၆၈)နှင့်(၇၁-၇၃ )မှ ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ် ပါသည်။)
၁၇၅၆ ခုနှစ်တွင် သန်လျင်မြို့ကိုအလောင်းဘုရားအောင်တော်မူရာတွင် ဖမ်းစီးသောသုံ့ပန့် များတွင် ကုလားသင်္ဘော ခလာသီများ လည်းပါဝင်သည်။ရန်ကုန် ရောက်ပြီး သွေးသောက်ကြီး ခန့်ရာတွင် ပီယာမဟာမတ် တို့အပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၂) ဦးပါဝင် သည်ကို တွေ့ရသည်။ (Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) Vol.1,p.187)
ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) `၌ ဆင်မြူရယ် ရှိတ် အနိစ္စရောက်၍၎င်း၏ပစ္စည်းများကို ၎င်းအား ဆက်ခသူံ တောင်းလာမှ ပေးရန် မြန်မာဘုရင်က သိမ်ဆည်းထားသည် ဆိုသော သတင်းကို ပဲခူမြို့မှပြန် လာ သော မွတ်ဆလင်ကုန်သည် များ က အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ မဆူလီပထန်ရှိ ကုန်တိုက် သို့ အကြောင်း ကြားခဲ့သည်။(ဆိုလိုရင်းမှာ ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) ခု ကတည်း က မွတ်ဆလင်ရှိ နေ ကြောင်း ထင်ရှားသည်။)
ကောဇ သက္ကရာဇ် (၆၉၅) ခုတွင် အရှေ့ဘက်ရှိ သက်တို့သည် တောင်စဉ်ကျေးရွာများဖျက်စီး နေသည် ကို ချေမုန်းရန်စစ်ကြော င်းအမျိုးမျိုးခွဲ၍ချီတက်ရာ`၌ အမတ်ကြီး (စနဲ)ပါသောစစ် ကြောင်း ကိုယ်တော် သူရဲ ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်း) ၊ ကုလား၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း) ၊ဘီပေါင်း ၅၀၀၀၀(ငါးသောင်း) နှင့်အတူ မအီလမ်းမှ စစ်ချီတက်သည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။
၁၇-ရာစုနှစ်များအတွင်း ညောင်းရမ်းခေတ်တွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း(၁၆၁၂-၁၆၂၈)လက်ထက်၌ ငဇင်ကာ နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားပြီး သင်္ဘော(၄)စီးပါ အိန္ဒိယစစ်သား(၃၀၀၀) ကျော် ဖမ်းဆီး ရမိရာ မွတ်စ လင်မ်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Ref : ‘မှန်နန်းရာဇ၀င်’ တတိယအတွဲ စာမျက်နှာ(၁၇၂)မှာ တွေ့ရပါ တယ်။
၁၈-ရာစုနှစ်များအတွင်း အိန္ဒိယပြည်မှ ရခိုင်ပြည်သို့ ၀င်ရောက်လာကြသူများတွင် များစွာသော မွတ်စလင်မ်များ ပါခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့တွင်ကျင်းပတဲ့ အာရှသမိုင်း ဆိုင်ရာကွန်ဂရက်တွင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် တင်သွင်း တဲ့ Coming of Islam to Burma Down စာတမ်း စာမျက်နှာ(၆)မှာ တွေ့ရပါတယ်။
၁၈-ရာစုနှစ်များအတွင်း အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ(၁၇၅၃-၁၇၆၀)လက်ထက်တွင် ဟိုင်းကြီး ကျွန်း ကို ချီတက် တိုက် ခိုက် ရာအောင်မြင်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ခဲ့သည့် သုံ့ပန်းများတွင် အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Ref : ‘ကုန်း ဘောင် ခေတ်မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး’ ပထမတွဲ၊ စာမျက်နှာ (၁၄၄)မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်များအတွင်း ကသည်းတို့နှင့်အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဖြစ်ပွားရာမှာလည်း ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ သုံ့ပန်းများ၊ ၀င်ရောက် ခိုလှုံသူများ လေးသောင်းကျော်ထဲမှာ အစ္စလာမ် သာသနာဝင် များပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကသည်း ပြည် တွင် အစ္စလာမ် သာသနာထွန်းကားနေသည်မှာ ၁၂-ရာစုနှစ်များကပင်ဖြစ်သည်။ Ref : ဟာဗေးရေး တဲ့ ‘မြန်မာရာဇ၀င်’
ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးရောက်လာခဲ့အခါ အလောင်းမင်း တရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျလက်ထက်(၁၇၅၃-၁၇၆၀) အတွင်းမှာ သန်လျင်ကိုချီတက်တိုက်ခိုက်ရာမှ ရရှိလာတဲ့ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များ၊ အကြိမ်ကြိမ် ကသည်း ပြည် တိုက်ခိုက်ရာမှ ရရှိသူ၊ ၀င်ရောက်ခိုလှုံကြသူ ကသည်းမွတ်စလင်မ် တို့ကို ရှိရင်းစွဲ မွတ်စလင်မ်အစုအဝေး များရှိရာဒေသ တို့မှာခွဲခြား နေရာချထားကြောင်း‘ကုန်းဘောင်ဆက်မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး’ ပထမတွဲ၊ စာမျက်နှာ(၂၉၈-၂၉၉)မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ကုန်းဘောင်ခတ်အဆက်ဆက်အတွင်း ဗဒုံမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း(၁၈၇၁-၁၈၁၉)ခေတ်မှာ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တို့ သည် အထက်ပါနေရာဒေသတိှု့မှာ အတည်တကျ လည်းရှိနေကြပြီးဘုရင့်သစ္စာ တော်ခံများလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ ဒေသများမှာ လည်း ပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီလူတွေအပေါ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တရားအရ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ပြဿနာ တို့လည်းရှိ လာတာကြောင့် ဘာသာတရားဓမ္မနဲ့ဆိုင် တဲ့ဆုံးဖြတ် ချက် တို့ကိုပေးနိုင်ရန် သာသနာ့ပညာရှိကြီးဖြစ်တဲ့ ‘အာဗိရှားဟ်ဟိုိစိုင်နီ သခင်ကြီး’ကို အစ္စလာမ်ဓမ္မသတ်မှူးကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တယ်လို့ အမိန့်တော် ပြန်တမ်းထုတ်ခဲ့တယ်။
အာဗိရှားဟ်ဟိုိစိုင်နီတပည့် ငရွှေလူ၊ ငရွှေအေးတို့က အရပ်ရပ်မြို့ရွာများမှာနေသည့် (ရခိုင်ပြည်အပါအ၀င်) ပသီ ကုလားတို့သည် ဘာသာကျမ်းရှိသည့်အတိုင်း အာဗိရှားဟ်ဟိုစိုင်နီ တပည့်် ငရွှေလူ၊ ငရွှေအေးတို့ပြသရာ နာခံကြစေ”လို့ ၁၁၆၉-ခု၊ တန်ဆောင် မုန်းလပြည့်ကျော်(၃)ရက်၊ ၁၈၇၀-ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့မှာ နာခံတော် ဘယကျော်ထင်တွင် ပြန်သည်လို့ ‘ဘိုးတော် မင်းတရားကြီး၏ ရာဇသတ်ကြီး’စာအုပ် အတွဲ-၄၊ စာမျက်နှာ(၂၇၆)မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ရခိုင် ဘုရင် နရမိတ်လှ လက်ထက်ဝန်ကြီးရာထူး၊ စစ်တပ်၊ ရေတပ်၊ ဗိုလ်မှူးရာထူး များ၌ လည်းကောင်း ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တို့၏ အစုအဝေးလူမျိုးစု ပင်ဖြစ်သည်။မွတ်စလင်မ်စာဆိုတော် စိုင်ယက်ဒ်ရှားအာလ်ဝါလ် (Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စန္ဒသူဓမ္မဘုရင်၏ နန်းရင်းဝန် ]`မာဂန်´မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဖြစ်သကဲ့သို့ ဆိုင်ယက်မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂျာဟစ် (Mujaehi နှင့် ဆုလေမန် (Sulaiman)တို့မှာ ရခိုင်နန်းရင်းဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြပြီး အရှရက်ဖ်ခန် (Asharaf Khan) မှာ စန္ဒသုဓမ္မ ဘုရင်၏ စစ်သူကြီးဖြစ်သည်။ Ref : ၁။ – MKရာမန်-ရ ၊ ၂။ – မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ မောင်သံလွင်၏ ရိုဝန်ညာလူမျိုးများ။
မဇ္စိုမဒေသ အန္ဒိယတိုက်၏ အရှေ့ဘက်ဒေသနေထိုင်သူများကို အနောက်ဘက်ဒေသအခေါ် အဝေါ်ဖြင့် ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းသား ဟု ခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ ရခိုင်တောင်ပိုင်းသားတို့ကလည်း ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင်ညာ ခေါ်ဆိုကြရာမှ ရိုဟင်ညာ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်လာ သည်။ “ဘင်္ဂါလီဒေသ၏ အရှေ့ကမ်းရှိ လူ့အစုအဝေး´´ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။အချို့က ရွာဟောင်း နေထိုင်ကြသည့် ကျားကဲ့သို့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိသည့် လူမျိုး၊ ရွာဟောင်းမှကျား၊ ရွာဟိန်းကျားမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု ကောက်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အင်ဒိုအာယိယာန်နှင့် မွန်ဂိုဂျွိုက်တို့မှာဟိမ၀န္တာတောင်၏တောင်ဖက် ကမ္မရုပဒေသ မာဂဒတိုင်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းဒေသဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားနယ်၊ အရှေ့မြောက်ဒေသမှ ရခိုင်ပြည်ရောက်ရှိကာ ကမန်လူမျိုး အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့သည်။ Ref :1.E.B.Harell; The History of Aryan Rule in India.page 34; 2.S.K.Chatterji;Ki-Ar-A-yana-Krit. page 22.
ကမန်လေးလံကိုင် သူရဲကောင်းဟု ပါရှင်းစကားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်မှုကို ရခိုင်မူပြု၍ ခေါ်ဆိုပညတ်ထားသည်။မူလက ဟိန္ဒူဘာသာကိုး ကွယ်ရာမှ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ထိတွေ့ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ခဲ့ရာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်ဘုရင်မင်းဘာကြီး(ခ)မင်းဘင်ကြီး(ခ) သီရိ သူရိယာ စန္ဒမဟာဓမ္မရာဇာ၊ ဇဘာရ်ရှား(1531-1553) လက်ထက် ဘင်္ဂလားကြည်း ကြောင်း၊ ရေကြောင်း ချီတက်ရာတွင် ကမန်လေးကိုင် သူရဲကောင်း (၅၀ ၀၀၀) ငါးသောင်းကျော်တို့မှာ လေး၊ လှံ၊ သိုင်း၊ ဓါး၊ သူရဲကောင်းတပ်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြထားသည်။ Ref : ၁။ – အရှင်ဥက္ကံ-စောမဲကျီစာအုပ်၂။ – ဦးလှထွန်းဖြူ-ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ- (စာမျက်နှာ-၄၇ )`၌ကမန်သူရဲကောင်း တပ် တွင် ဘင်္ဂလားဘုရင် ဒေါ့ဒါအုပ်၏ အရေးနိမ့်ခဲ့သည့် စစ်သည်များ (၁၅၇၆) နှင့် မဂိုဘုရင် Shah Jahan ၏ သားတော် ရှာရူဂျာ ဘုရင်တပ်မှ စစ်သည်များ (၁၆၃၉) မှ တပ်သားများ၊ ဘာသာရေးအခြေခံတူညီမှုအပေါ် ကမန်သူရဲကောင်း တပ်တွင် ဖြည့်တင်းပေးခဲ့သည်။ကမန်လူမျိုး တို့၏ H Civil Society လူယဉ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် နိုင်ငံတော်မှ အသိအမှတ်ပြု ထားသည်။
ပုဂံကျောက်စာ အနန္တသူ(လေးမျက်နှာဘုရား) အိမ်တော်ရာကျောက်စာ၊ ညောင်းရမ်းကြီးသမီး တောင်ဘက်မျက်နှာကျောက်စာ၊ ပုဂံဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကျောက်စာ တို့တွင် ဖော်ပြချက်အရ ပုဂံခေတ်ကပင် ကုန်သည်တော်၊ အမြောက် တပ်အမှုထမ်း များ အ ဖြေစ်နေထိုင် လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။တရုတ်ပြေးမင်းလက်ထက်၌ တာတာတို့ မြန်မာပြည်သို့ ၀င်ရောက်ထိုက်ခိုက်ရာ ယူနန်ပြည်နယ်မှ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်များ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။နန်ပေါ့၇ွာသို့ ပန်းသေးများ စုစည်းမိရာ ပန်လုံဟု ပညတ်ခဲ့သည်။ မင်းခေါင်ကြီး (အေဒီ-၁၄၀၁-၁၄၂၂) သားတော် မင်းရဲကျော်စွာ ပုသိမ်မြို့သိမ်းယူရာ ပန်းသေးတို့က ရွှေ၊ငွေ၊ပုဆိုးသက္ကလပ်၊ ပရပတ်၊ နီပါးဆက်ကြ၏။Ref : ၁။BaShin;ComingofIslam ;၂။ ဦးယူစွတ်-ပန်းလုံ ပန်းသေးအမျိုးသားသမိုင်း ;၃။ W.S.De Saj; History of the British Residency in Burma. Page-154.; ၄။ မြန်မာမင်းများ အရေးတော်ပုံ၊ စာမျက်နှာ- ၂၉၈
မင်မင်းဆက်၏ ယုန်လီ၏ နောက်လိုက်အကြီးအကဲနှစ်ဦးတွင် တိုက်ခွန့်ခွန့်မှာမှာ ပန်းသေးဖြစ်၍ ချဲန်ရှမ်းတုန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် သင့်မြတ်စွာယှဉ်တွဲ လျက် တုက်ခွန့်ခွန့်(တိုက်ခုံခုံ)မှာ ကိုးကန့်ဒေသနမ့်ဟန်မော်အရပ် အ ခြေပြု နေထိုင်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် “မာ´´ အုပ်စုလူမျိုးအကြီးအကဲမှ ဆက်လက်စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၈၆၀ တွင် အကြီး အကဲ မာလင်ယွီ(၁၉၃၄-၃၅)တွင် မာမေတင်၊ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ခံပြီး၊ ၀နယ်ကွမ်ပြယ်စော်ဘွား ၏ သမီးနှင့် လက် ဆက်ခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလ ပန်လုံလူငယ်များအား ခေါင်းဆောင် မာကွမ်းကွေ့ ဥိးဆောင် တိုက်ခိုက် သကဲ့ သို့ မာမေတင်က မြန်မာတို့ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ပန်လုံမြို့ကို မြန်မာနယ်မြေပိုင်နက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
စစ်တွေမြို့ သမိုင်းဝင် သင်္ချိုင်း နေရာပြောင်းရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေမြို့မှ ၂၂၅ နှစ် သက်တမ်းရှိ အာကျိတ်တော်ကုန်းရှိ သင်္ချိုင်းဟောင်းကို ၁၇၈၄ ခုနှစ် စစ်တွေမြို့တည်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မူဆလင် ဘာသာဝင်များနှင့် တရုတ်လူမျိုးများအတွက် သီးခြားခွဲထားရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။သင်္ချိုင်း၌ လွတ်လပ် ရေးကြိုးပမ်းစဉ် ကျဆုံးခဲ့သော ဗိုလ်မှူးမြတောင်ရည် အပါ အဝင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်တွေဆန်ပြဿနာတွင် အာဏာ ပိုင်များ က ပစ်ခတ်သဖြင့် သေဆုံးခဲ့သူများလည်း မြှပ်နှံခဲ့သည်။Ref ဒါကာ – (မဇ္ဈိမ) )
ဦးလှဒင်မြန်မာဘာာပြန်ဆိုသောရတနာရွှေမြေ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၅၀ တွင် ရှေးဟောင်း သုတေ သနကျောက်စာ လိုက်စား သူတို့က သိရိဂုတ္တရတောင်ကုန်းသည်တစ်ခါက တည်ရှိ ခဲ့ဘူးသော ဓညဝတီမြို့ဟောင်း၏ အရှေ့မြောက်ဖက် တွင်တည်ရှိ ကြောင်းထိုမြို့တော်၏မြို့ရိုးဟောင်းများကိုယခုတိုင်တွေ့မြင်ရ သဖြင့် ထိုမြို့ရိုးကို အေဒီ ၁ ရာစုထက်စော ၍ တည်ထောင်ခဲ့သော အိန္ဒိယ ကုလား မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့ကို ကျောက်စာအထောက်အထားများ အကိုးအကား များ စွာ ဖြင့်ပြကြ သည်။
Posted in: သမိုင်း, အထူး
ရခိုပြည်သို့ ဘယ်သူတွေ ခိုးဝင်လာသလဲ
ရခိုင်ကို ဘယ်သူတွေ ၀င်ခဲ့သလဲ | ဌေးလွင်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှ မအုပ်ချုပ်မှီက သန်းခေါင်းစာရင်း အတိအကျကောက်ယူပြီး လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်း မရှိခဲ့ပါ။ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှသာ လူဦးရေ သန်းကောင်းစာရင်းကို ပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ မှတ်တမ်း- Encyclopaedia Britannica အရ စီစစ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
Encyclopaedia Britannica အရ ရခိုင်နယ် လူဦးရေး တိုးပွားလာမှုမှာ- ၁၈၃၁ ခုနှစ်မှာ ၁၇၃၀၀ ယောက်၊ ၁၈၃၉ ခုနှစ်မှာ ၂၄၈၀၀၀ ယောက်၊ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ- ၄၆၁၁၃၆ ယောက်၊ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှာ ၇၆၂၁၀၂ ယောက် ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုနှုန်းနဲ့ တိုးပွားဘို့ရာ- ၁၈၂၆ ခုစ ပထမ ၅ နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် တိုးနှုန်း ၁၁.၅၉ % ဖြစ်ရမယ်၊ ၁၃ နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် ၇.၂၄% ဖြစ်ရမယ်၊ ၄၅ နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် ၃.၄၆% ဖြစ်ရမယ်၊ ၇၅ နှစ် အတွင်း နှစ်စဉ် ၂.၇၄% ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလူဦးရေတိုးမှု ရာနှုန်းတွေထဲက ၁၈၃၉ ခုနှစ်အထိ- ပထမ နဲ့ ဒုတိယ တိုးနှုန်း ဖြစ်တဲ့ နှစ်စဉ် ၁၁.၅၉% နဲ့ ၇.၂၄၃% တို့ဟာ သဘာဝ တိုးနှုန်း လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရခိုင်နယ်ရဲ့ အပြင် ဘက်က ၀င်ရောက်လာတဲ့ လူဦးရေတိုးနှုန်းများသာ ဖြစ်ရပါမယ်။
၁၈၂၆ ခုနှစ် ရခိုင်ကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုပ္မဏီထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ရခိုင်နယ်ထဲမှာ လူဦးရေ ခုန်ပျံတိုးတက်လာတယ် ဆိုတာတော့ မငြင်းနိုင်ပါ။ ဗြိတိသျှ တရားဝင် ရခိုင်ဒေသ- မြို့ပြရေးရာ ထိန်း သိမ်းရေး အရာရှိ မစ္စတာ ပက်တန်က ၁၈၂၆ ခုနှစ်မှာ ရခိုင်ဒေသ လူဦးရေဟာ ရခိုင် ၆၀၀၀၀၊ မွတ်ဆလင် ၃၀၀၀၀ -စုစုပေါင်း တစ်သိန်းထက် မကျော်လွန်ပါ လို့ ရီပို့တ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၁၈၂၆ ခု မတိုင်မှီက တည်းက ရခိုင်နယ်မှာ မွတ်ဆလင်ဟာ အခြားလူမျိုး ၂ ယောက် မွတ်ဆလင် ၁ ယောက် နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။)
လူဦးရေ ပွားနှုန်း ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ မွတ်ဆလင် လူဦးရေက ၁၈၂၆ မတိုင်မှီမှာ လူဦးရေ သုံး သောင်း ရှိပြီး ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ ခြောက်သောင်းနီးပါး (နှစ်ဆ နီးပါး) တိုးသွားပြီး-၊ လူဦးပွားနှုန်း မကောင်း ပါဘူး ဆိုတဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများက ၁၈၂၆ ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ ၆၀၀၀၀ (ခြောက်သောင်း)က ၁၈၇၁ နှစ် မှာ လူဦးရေ ၁၇၁၆၁၂ (သုံးဆ နီးပါး) တိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေလောက်လည်း ကလေး မမွေးနိုင်ဘဲ ဒီလူတွေ ဘယ်လို တိုးသွားခဲ့တာလဲ။ မြေကြီးထဲက ထွက်လာသလား၊ မိုးပေါ်က ကျလာ သလား– ဆင်ခြင်ဘို့ လိုပါတော့မယ်။
ဗြိတိသျှဟာ ရခိုင်ကို အရှေ့အိန္ဒိယကုပ္မဏီထဲမှာ ထည့်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ် တော့ အလုပ်သမားတွေ လိုလာခဲ့တယ်။ ဒီအခါ ဘင်္ဂလားနယ်ထဲက အလုပ်သမားတွေကို ရခိုင်ထဲကို ထည့်ခဲ့တယ်။ ဒီလို ထည့်ခဲ့တာမှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓလူဦးရေက အခြားသော လူဦးရေထက် ပိုမိုများပြားခဲ့တယ် လို့ ဂျာကွဗ်လိုင်ဒါ Jacques Leider’s ရဲ့ သုတေသနစာတမ်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အလားတူပဲ ရခိုင် သမိုင်းဆရာများကလည်း ဗမာသတ်လို့ ရခိုင်တွေ အများအပြား သေကြေခဲ့ရပြီး ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်စဉ် မှာ ရခိုင်မှာ လူမရှိတော့လို့ ဘင်္ဂလားနယ်က ရခိုင်တွေကို ရခိုင်ထဲသို့ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုထားပါ တယ်။
ဒီတော့ ရခိုင်ကို ၁၈၂၆ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓအမည်ခံ ဘင်္ဂလီမောဂ် လူမျိုးများက ၀င်ခဲ့ပါသလား၊ သို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်များက ၀င်ခဲ့ပါသလား- ဆင်ခြင်လို့ ရမှာပါ။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်သေးသလဲ– ဒါတွေကို စီစစ်နိုင်ဘို့ ရခိုင်နယ်ရဲ့ လူဦးရေ အများဆုံး ကျက်စားရာ ဒေသဖြစ်တဲ့ စစ်တွေခရိုင် မှတ်တမ်းကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။- အောက်ပါဇယားမှာ Encyclopaedia Britannica (ဗြိတိနီကာ ဗဟုသတ ဟင်းလေး အိုးကြီး မှတ်တမ်း) စာမျက်နှာ ၈၆ အရ စစ်တွေခရိုင် လူမျိုးနွယ်နှင့် လူဦးရေ ဇယားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူဦးရေ ဇယားက စစ်တွေနယ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းမှာ (ရခိုင်နယ် တစ်ခုလုံး မဟုတ်) ၁၈၇၁ မတိုင်မှီကတည်း မွတ်ဆလင်ပေါင်း ၅၈၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ် ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ရခိုင်ခွဲ ထွက်ရေး ၀ါဒီများနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်များ မုန်းတီးလိမ်ညာနေသလို ၁၉ ရာစု နောက်ပိုင်းမှ မွတ်ဆလင် တွေ ၀င်ရောက်လာတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း သက်သေဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ လူဦးရေ တိုးနှုန်းနဲ့ ဒေသတွင်း လူဦးရေရဲ့ ရာနှုန်းများဇယားကို ပြန်ကြည့်ပါ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဒေသတွင်း လူဦးရေရဲ့ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ ၂၁% ဖြစ်ပြီး ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာ ၃၃.၇% ဖြစ် ကြောင်းတွေ့ရပါမယ်။ ဒီတူညီတဲ့ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ- ရခိုင်နယ်အတွင်း ဗမာလူဦးရေ ခုန်ပျံတိုးနှုန်းကို ကြည့်ပါ- ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ ၁.၆၇% ကနေပြီး-၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာ ၁၇.၄% ထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ပြိုင် နက်ထဲမှာ ဒေသခံရခိုင်များနဲ့ အခြားသော လူမျိုးများက ၁၈၇၁ မှာ ရှိတဲ့ ရာနှုန်းထက် လျှော့ကျသွား တာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီဇယား အရ ရခိုင်ဗုဒ္ဓ လူဦးရေဟာ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ ၆၂% ရှိခဲ့ရာက ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာ ဒေသတွင်း လူဦး ရေရဲ့ ၃၉.၅၂% ထိ လျှော့ကျသွားပါတယ်။ ဒါကို ရခိုင်မျက်ကန်းတွေက မွတ်ဆလင်တွေက ရာနှုန်း အကြီးအကျယ် တိုးပွားလာပြီး- ရခိုင်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားသလို လျှောက်ပြောပါတော့တယ်။ မွတ် ဆလင် ရာနှုန်းက အစကလည်း သုံးပုံတစ်ပုံ၊ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သုံးပုံတစ်ပုံ သာ ရှိနေပြီး- ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာတွေက မိမိကိုယ်မိမိ ဗမာ အဖြစ်ခံယူလိုက်လို့ ရခိုင်လျှော့ပြီး ဗမာ ရာနှုန်း ခုန်ပျံတိုးသွားတာကို မသိဟန်ပြုနေပါတော့တယ်။
လက်ရှိခေတ်ထိ- ရခိုင်နယ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ဗမာ ပါလို့ ခံယူသူပေါင်း များစွာ ရှိနေတယ်၊ ဥပမာ အားဖြင့် သံတွဲမြို့မှသည် ဂွမြို့ထိ ရှိသမျှသော ကျေးရွာ၊ မြို့ငယ်၊ မြို့နယ် အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗမာလို့သာ ခံယူပါတယ်။ မဆလ ခေတ်အတွင်း သံတွဲမြို့နယ်နဲ့ ဂွမြို့နယ် နယ်စပ် ဖြစ်တဲ့ ရေငံရောက် မြေနေရာတွေကို လယ်လုပ်မယ့်သူ မရှိလို့ မြောက်ပိုင်းရခိုင်တွေကို ခေါ်ယူကာ ကျက်သရေကျွန်း ဆိုတဲ့ ရခိုင်ရွာလေး တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ သံတွဲနဲ့ ဂွမြို့အကြား မြောက် များစွာသော ကျေးရွာအားလုံးရှိ ဗမာခံယူသူများက မှတ်ပုံတင်မှာ အတင်းဖြည့်ခိုင်းလို့ လူမျိုးရခိုင် ဆိုပြီး ရေးနေရပေမယ့်- အခုထိ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗမာ လို့ခံယူထားကြောင်း လက်တွေ့သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်လူဦးရေ လျှော့သွားရခြင်း အကြောင်းထဲမှာ (၁) ဘင်္ဂလားနယ်က ၀င်ရောက်လာတဲ့ ရခိုင် လူဦး ရေ လျှော့သွားခြင်း (၂) ဘင်္ဂလီရခိုင်များကို မနှစ်သက်လို့ ဒေသခံ ရခိုင်များက မိမိကိုယ်မိမိ ဗမာလို့ ခံယူလိုက်ခြင်း- စတဲ့ အကြောင်းများကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ရခိုင်မှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်များက ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘ၀တူများသာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒေသခံရခိုင် များမှာ သူတို့ရဲ့ အစဉ်အလာအရ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဘို့ရာ ရေမြေများ ရှိခဲ့သလို၊ ဒေသခံမွတ်ဆလင် (ရခိုင်နယ်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံသော လူဦးရေ)မှာလည်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ဘို့ရာ ရေမြေများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများက ဒေသခံမွတ်ဆလင်များရဲ့ လယ်မြေများကို မတရားအနိုင် ကျင့် သိမ်းပိုက်ယူဘို့ရာ စိတ်မကူးခဲ့ပါ။ မကြံစည်ခဲ့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက် နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီရခိုင်များကသာ သူတို့မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဘို့ရာ ရေမြေများ မရှိတဲ့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ မွတ်ဆလင်များဆီက လယ်မြေများကို မတရားသိမ်းပိုက်ရယူလိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ သူတို့ ဇာတိကို ကွယ်ဝှက်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်အဖြစ်လိမ်ညာလျှက် မွတ်ဆလင်မုန်း စစ်အာဏာပိုင် များနဲ့ ပူးပေါင်းကာ- မွတ်ဆလင်များပိုင်မြေများကို သိမ်းဆည်းလုယူခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲ့ပါပြီ။ ဆက် လက်ပြီး သိမ်းဆည်းလုယူဘို့ရာ ကြံစည်လျှက် ရှိနေပါသေးတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး အချက်က- အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်ဆလင်များကို မွတ်ဆလင် လို့သာ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ မွတ်ဆလင် လူဦးရေဟာ ရခိုင်ဒေသရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု ခေတ်မှာလည်း မွတ်ဆလင်ဟာ သုံးပုံတစ်ပုံ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဆို ရခိုင်နယ်မှာ ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များကို တိုင်းရင်းသား ကမန် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စာရင်းပြထားတာ လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။ လက်ရှိ ရခိုင် လူဦးရေ လေးသန်းလောက်မှာ ကမန်က လူဦးရေ သုံးသောင်းမျှပင် မရှိပါ။ ကျန် မွတ်ဆလင်များ ဘယ်ကို ရောက်သွားပါသလဲ။
ရိုသားဖြူစင်တဲ့ သမိုင်းပညာရှင်များ မနုဿဗေဒပညာရှင်များ လေ့လာကြည့်ပါ။ သမိုင်းမှန်ကို ထိမ် ၀ှက်ထားသူများဟာ သမိုင်းမှာ တရားခံဖြစ်ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ သမိုင်းလိမ်၊ စာပေလိမ်ပေါင်းများစွာနဲ့ မြန်မာလူငယ်မျိုးဆက်များစွာကို နှစ်ထားခဲ့လို့ မြန်မာပြည်ကြီး နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ပြီ ဆိုတာကိုလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ သူများ (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ)ကဲ့သို့ တန်းတူ တိုးတက်ချင် ပြီး- မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ပညာရပ်အမှားတွေ၊ သမိုင်းအမှားတွေထဲမှာ ဆက်လက်နစ်မြောနေမယ် ဆိုရင်တော့–၊ အဲ့ဒီလိုလူများ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ရင်လေးစရာသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။